အောင်ကလေး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘလော့များ (25)ဆွေးနွေးချက်များ (1)အဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ အောင်ကလေး's Likes အောင်ကလေး's ၏မိတ်ဆွေများ
Aye Aye Cho commented on အောင်ကလေး's blog post 'ရုပ်လှချင်ရင် (ရဝေနွယ်-အင်းမ) (ရုပ်ချောစေသော အရမ်းလွယ်ကူပေမယ့် အများမသိသေးတဲ့ ကောင်းမှုလေးတစ်ခု)'"ွှThanks so much ...."Dec 23, 2012အောင်ကလေး liked ♣တောသူမလေး♣'s blog post 'အယုတ် အလတ် အမြတ် ခွဲနည်းတစ်မျိုး'Oct 27, 2012အောင်ကလေး သည်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံပြောင်းသွားပါသည်။Oct 27, 2012kyaw kyaw win(မီးအိမ်ရှင်) commented on အောင်ကလေး's blog post 'စေတနာဗေဒင်'"good!"Oct 7, 2012အောင်ကလေး postedablog postစေတနာဗေဒင်(လူ့ဘ၀၌ အကောင်းလောကဓံရှိသလို အဆိုးလောကဓံလည်း ရှိချေရာ လူသားမှန်သမျှ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို အဆိုးလောကဓံများလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။) “ စေတနာဆိုးရင် ကံဆိုးတာပါပဲ။ စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းတာပါပဲ။ ကံကောင်းဖို့ ဘာမျှ အခက်အခဲမရှိဘူး။ ငါ့ကံကောင်းသလား၊ မကောင်းဘူးလားဆိုတာကို ဗေဒင်မတွက်နဲ့ သိတယ်။ လက္ခဏာ မမေးဘဲနဲ့ သိတယ်။ ကံကောင်းသလား၊ မကောင်းသလား ဆိုတာကို ကိုယ့်စေတနာကို ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တွက်ကြည့်ရင် မသိဘူးလား။ စေတနာဆိုးကြရင် ကံဆိုးကြတာပါပဲ။ စေတနာကောင်းကြရင် ကံကောင်းကြတာပါပဲ။ စေတနာကို ကံလို ခေါ်ကြတာ။…See MoreOct 7, 2012 1
အောင်မျိုးထွန်း commented on အောင်ကလေး's blog post 'ကုသိုလ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန်'"တကယ်ကို အနှစ်သာရရှိပါတယ်... မျှဝေပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..."Aug 27, 2012အောင်မျိုးထွန်း liked အောင်ကလေး's blog post 'ကုသိုလ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန်'Aug 27, 2012thet naing commented on အောင်ကလေး's blog post 'ကုသိုလ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန်'"စိတ်ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘောက ဖြူစင်ပြီးသားပါ၊ ကိလေသာတွေကြောင့်သာ ညစ်နွမ်း ရတာပါ၊ ဒါကြောင့် ကုသိုလ်စိတ်များတိုးပွားအောင် ကြိုးစားကြ
ရပေတော့မည်၊ ဆက်လက်မျှဝေနိုင်ပါစေ၊ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ
ပြည့်ဝနိုင်ပါစေလို့ ...။"Aug 27, 2012အောင်ကလေး postedablog postကုသိုလ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန်(မိမိ၏ အပြုအမူကြောင့် သူတစ်ပါး နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့သွားလျှင် ကုသိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ တဖက်သားအပေါ် မေတ္တာကရုဏာဖြင့် နူးနူးညံ့ညံ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ကြည့်သော အကြည့်လေးတစ်ချက်၌ပင် ကုသိုလ်ဓာတ်လင်းလက်နေပါသည်။) ကောင်းမှုပြုသောသူသည် ဤဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ နောင်ဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ပစ္စပ္ပန် တမလွန် နှစ်တန်သော ဘ၀တို့၌ ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ထိုသူသည် မိမိပြုပြီးသော ကောင်းမှုကံကိုမြင်၍ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရလေ၏ (ဓမ္မပဒ)ကောင်းမှုပြုသော သူသည် ဤဘ၀၌လည်း နှစ်သက်ရ၏။ နောင်ဘ၀၌လည်း နှစ်သက်ရ၏။ ပစ္စပ္ပန် တမလွန် နှစ်တန်သော ဘ၀တို့၌…See MoreAug 26, 2012 2
Theingi Lwin liked အောင်ကလေး's blog post 'ဒေါသတွေဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နေရတာလဲ'Aug 15, 2012အရှင်အာစိဏ္ဏ commented on အောင်ကလေး's blog post 'လူတိုင်းအတွက် အတုယူစရာ အနှိုင်းမဲ့ရဟန်း'"ကောင်းပါတယ်နောက်လည်းရေးအုံးနော်"Aug 13, 2012Cicada liked အောင်ကလေး's blog post 'တစ်ဖက်သတ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ကိုသတ်ပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးသေပါတယ်'Aug 13, 2012yannaingaung liked အောင်ကလေး's blog post 'လူတိုင်းအတွက် အတုယူစရာ အနှိုင်းမဲ့ရဟန်း'Aug 13, 2012ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) commented on အောင်ကလေး's blog post 'တစ်ဖက်သတ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ကိုသတ်ပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးသေပါတယ်'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ နောင်လည်း ဒီလို မျိုးတရားတော်များ များများတင်ပေးပါဦးနော်။
သာဓု........သာဓု.........သာဓု"Aug 13, 2012အောင်ကလေး postedablog postတစ်ဖက်သတ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ကိုသတ်ပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးသေပါတယ်နောက်တစ်ခု အကျိုးစီးပွားတတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ဆိုတာကတော့ အရပ်ထဲမှာ ပြောနေကျအတိုင်းပဲပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာအောင်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင် လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကျိုးစီးပွားတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော။ ကိုယ်အဆင်ပြေရင်ပြီးရော၊ ကိုယ်ချမ်းသာရင်ပြီးရော၊ ကိုယ်ပြည့်စုံရင်ပြီးရော။ သူများတွေဘာဖြစ်ဖြစ်။ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်စုံဖို့အတွက် သူတစ်ပါး စိတ်ဆင်းရဲရင် ဆင်းရဲပါစေ။ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျရင် ကျပါစေ။…See MoreAug 12, 2012 1
မှတ်ကျောက် commented on အောင်ကလေး's blog post 'ဒေါသတွေဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နေရတာလဲ'"ကျေးဇူးပါ...ဒေါသရှိတာမကောင်းဘူးပေါ့ အဲ့လို ဒေါသရှိတာဟာ ဒိဋ္ဌိ(ငါစွဲ)ရှိလုိ့ပါပဲ ဒိဋ္ဌိပါးအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်..နောက်ပြီး ပေါ်လာရင် ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကိလေသာကို ပယ်သတ်ဖို့က 1. ကိလေသာရဲ့ အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့် 2.ပေါ်ရင်းပေါ်နေမှန်းစိတ်ကို…"Jul 29, 2012 More... RSS
ဒီဘလော့ကို October 6, 2012 တွင်2:38pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
(လူ့ဘ၀၌ အကောင်းလောကဓံရှိသလို အဆိုးလောကဓံလည်း ရှိချေရာ လူသားမှန်သမျှ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို အဆိုးလောကဓံများလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။) “ စေတနာဆိုးရင် ကံဆိုးတာပါပဲ။ စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းတာပါပဲ။ ကံကောင်းဖို့ ဘာမျှ အခက်အခဲမရှိဘူး။ ငါ့ကံကောင်းသလား၊ မကောင်းဘူးလားဆိုတာကို ဗေဒင်မတွက်နဲ့ သိတယ်။ လက္ခဏာ မမေးဘဲနဲ့ သိတယ်။ ကံကောင်းသလား၊ မကောင်းသလား ဆိုတာကို ကိုယ့်စေတနာကို ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ကုသိုလ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဘ၀ကောင်းဘ၀မွန်
ဒီဘလော့ကို August 26, 2012 တွင်1:31pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
(မိမိ၏ အပြုအမူကြောင့် သူတစ်ပါး နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့သွားလျှင် ကုသိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ တဖက်သားအပေါ် မေတ္တာကရုဏာဖြင့် နူးနူးညံ့ညံ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ကြည့်သော အကြည့်လေးတစ်ချက်၌ပင် ကုသိုလ်ဓာတ်လင်းလက်နေပါသည်။) ကောင်းမှုပြုသောသူသည် ဤဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ နောင်ဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ပစ္စပ္ပန် တမလွန် နှစ်တန်သော ဘ၀တို့၌ ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ထိုသူသည် မိမိပြုပြီးသော ကောင်းမှုကံကိုမြင်၍ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရလေ၏ (ဓမ္မပဒ) ကောင်းမှုပြုသော သူသည် ဤဘ၀၌လည်း… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... တစ်ဖက်သတ်ဆိုတာ တစ်ဖက်ကိုသတ်ပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံးသေပါတယ်
ဒီဘလော့ကို August 12, 2012 တွင်1:38pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
နောက်တစ်ခု အကျိုးစီးပွားတတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ဆိုတာကတော့ အရပ်ထဲမှာ ပြောနေကျအတိုင်းပဲပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွား ထိခိုက်နစ်နာအောင်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင် လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကျိုးစီးပွားတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော။ ကိုယ်အဆင်ပြေရင်ပြီးရော၊ ကိုယ်ချမ်းသာရင်ပြီးရော၊ ကိုယ်ပြည့်စုံရင်ပြီးရော။ သူများတွေဘာဖြစ်ဖြစ်။ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်စုံဖို့အတွက် သူတစ်ပါး စိတ်ဆင်းရဲရင် ဆင်းရဲပါစေ။ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျရင် ကျပါစေ။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒေါသတွေဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နေရတာလဲ
ဒီဘလော့ကို July 26, 2012 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments
ဒေါသတွေဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နေရတာလဲငြိမ်းအေးသော ဘ၀ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက် နောက် အရည်အသွေးတစ်ခုကတော့ "ဒေါသကင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် စိတ်မှာ အမျက်မပါခြင်း " ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးပါပဲ။
ဒေါသဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကို စိတ်တိုတယ်၊ စိတ်ဆိုးတယ်၊ အမျက်ထွက်တယ်လို့ ဘာသာပြန် ကြပေမယ့် သူရဲ့  တိုက်ရိုက်ထွက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပျက်စီးခြင်းပါပဲ။
ပျက်စီးခြင်းသဘော၊ ပျက်စီးနေတဲ့သဘောကို ဒေါသလို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်လည်း ပျက်စီးနေတယ်။ စိတ်လည်း ပျက်စီးနေတယ်။ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင် ကိုယ်အမူအရာတွေက… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (1 comment)
6:12pm အချိန်March 21, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
dimplemit ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
4. "တရားအားထုတ်ခြင်းသည် အကောင်း ဆုံး စိတ်အပန်းဖြေနည်း"
5. စိတ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိသလဲ
6. "တရား ဟူသည်"
7. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။
8. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (အက်ဒမင် ကိုညီညီတင်နှင့် တောသူမလေးတို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
9. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
10. အရှင်မောဂ္ဂလန် မထေရ်မြတ်ကြီး အလောင်းတော်, တရားထူးရသွားသော တရားတော်။
11. "ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"
13. ** ပုရိသတို့အတွက် သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ် **
14. တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ
15. နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်
16. သောတာပန်၏ ထူးခြားချက်(၇)ရပ်
18. သာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။
19. စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)
20. "တစ်လတာအတွင်း နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓမ္မဘလော့ဘ်တစ်ပုဒ် ကြေညာခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်"
Top News · Everything thein wai posted blog postsမြတ်စွာဘုရား၏ ထူးခြား အံ့သြဖွယ်များ (ဗုဒ္ဓနေ့အတွက်)။ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၂) ။2 hours agoကေခိုင်စိုး liked လင်းကိုကို's discussion သမထ ဘာဝနာနဲ့ ၀ိပသနာ ဘာဝနာ4 hours agoမူကြိုဆရာ posted blog posts“သမထနှင်.၀ိပဿနာ”(အားထုတ်ယောဂီများအတွက်အထူး)“သမထနှင်.၀ိပဿနာ”(အားထုတ်ယောဂီများအတွက်အထူး)5 hours agoကေခိုင်စိုး replied to yamin's discussion 'ဘာသာခြား ဆန့်ကျင်ရေးတရား'"တရားဟောဆရာတော်တစ်ပါးပြောသလိုပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေထက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ကြ…"6 hours agoKyi Maung commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'အရှေ့ကိုလျှောက်ပါတဲ့ အနောက်ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင်…'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏။"6 hours agoKyi Maung commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'ဘဝရဲ့စိတ်ပျက်ကြေကွဲချိန်မှာ ပြုံးပါ'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏။"6 hours agoကေခိုင်စိုး commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'"အရှင်ဘုရားပြောတာမှန်ပါတယ်ဘုရား"6 hours agoကေခိုင်စိုး liked အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'6 hours agoကေခိုင်စိုး postedastatus"မြင့်မြတ် ၍အပြစ်ကင်းသောလုပ်ဆောင်ခြင်း"6 hours ago 0
Soe Gyi shared အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post on Facebookမကျေနပ်တဲ့ သံယောဇဉ်7 hours agoSoe Gyi liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မကျေနပ်တဲ့ သံယောဇဉ်'7 hours agoSoe Gyi shared မှတ်ကျောက်'s blog post on Facebookဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ7 hours ago More... RSS